Meere - Wikipedia
Kani waa maqaal ku saabsan Meereyaasha guud ahaan. Bogag kale fiiri Koon iyo Bahda Qoraxda Midaysay.
Meere (Af Ingiriis : Planet; Af-Carabi: كوكب‎) waa dhul ama duni ka sameysan dhagaxaan, caro iyo hawo oo ku wareegta xidig ama qorax.
Sideeda Meere ee Bahda Qoraxda Midaysay
Dusaa, Waxaraxir, Dhul, iyo Farraare
Cirjeex iyo Raage (Neefo Waawayn)
Uraano iyo Docay (Baraf Waawayn)
Waxay u muuqdaan sida uga fog yihiin Qoraxda iyo midabkooda saxda ah, iyio xajmiga (ma ahan miisanka).
Meereyaasha iyo xajmigooda. Labada ugu sareeya: Uraano (Uranus) iyo Docay (Neptune); Sadexda dhexe: Dhulka, xidiga Sirius B iyo Waxaraxir (Venus); Qeybta hoose: Dusaa (Mercury) iyo Farraare (Mars); Ugu hooseeya: Dayaxa, Meereyasha yar-yar Buluuto (Pluto) iyo Haumea.
Muuqaalka Meereha aan ku noolnahay ee Dhulka.
Muuqaalka Meereha Farraare ama Mars.
Sida Cilmi Fallagu sheego waxa jira in ka badan balaayiin meereyaal Koonkan eeynu ku noolnahay. Meerayaasha waxaa guud ahaan loo qeeyniyaa labo: mid xajmi wayn oo cufkiisu yar yahay kana samaysan hawooyin iyo mid xajmi yar oo cufkiisu wayn yahay kana samaysan oogo dhagaxaan ah.
Iyadoo la tix raacayo qeexida hay'ada Cilmi Fallaga ee dunida IAU (Midowga Cilmiga Xidigaha), waxa si rasmi ah loo aqoonsan yahay ineey jiraan 8 meere Bahda Midaysay Qoraxdu ama (Solar System).
Sideedaas Meere waxay kala yihiin Dusaa (Mercury) oo Qorraxda ugu dhow, Waxaraxir (Venus), Dhulka iyo meeraha Farraare (Mars).
Meerayaasha waawayn ee neefta ka samaysan; Cirjeex (Jupiter), Raage (Saturn), Uraano (Uranus) iyo meeraha Docay (Neptune).
Ka dib waa meerayaasha xajmiga waaweeyn ee ka samaysan hawada iyo boodhka ee Cirjeex (Jupiter), Raage (Saturn), Uraano (Uranus) iyo meeraha Docay (Neptune).
Sidoo kale waxaa jira meerayaal yar-yar oo dhamaantood baraf, hawo iyo xoogaa caro ah ka sameysan waxaana ka mid ah meeraha yar ee Bluto (Pluto) oo waqtiyadii hore loo aqoonsanaan jirey in uu ka mid yahay Bahda Midaysay Qorraxdu.
Meerayaashu weey kala xajmi duwan yihiin oo kala cimilo duwan yihiin. Meerayaasha qaar, sida Dusaa ama Venus aad ayuu u kulul yahay maadaama qoraxda aad ugu dhow yahay. Halka meerayaasha qaar leeyihiin dayaxyaal aad u faro badan, sida meeraha Raage ama Saturn wuxuu leeyahay 32 dayax oo ku wareega meerahaasi.
1 Taariikhda Cilmi Falaga
1.2 Giriiga & Romanka
1.6 Qarnigii 19aad & 20aad
1.7 Qarniga 21aad
3 Qeeybaha Meerayaasha
3.1 Meeraha dhexe
3.2 Meerayaasha Baxsan
3.3 Duni Yar
3.4 Qaab Dhismeedka
3.5 Muuqaalka Guud
3.6 Samayska Gudaha
3.7 Wareega Meere
3.7.1 Wareega Sanadle
3.7.2 Gedgedoonka Meere
3.9 Cufka iyo Miisaanka
3.10 Tirada Dayax ee Meeraha
3.10.1 Dayaxa Dhulka
3.10.2 Dayaxa Farraare
3.10.3 Dayaxa Cirjeex
3.10.4 Dayaxa Raage
3.10.5 Dayaxa Uraano
3.10.6 Dayaxa Docay
4 Meerayaasha Koonka
5 Aqoonta Aadamaha ee Koonka
6 Nolosha Ka Jirta Bahda Qoraxdu Midaysay
6.1 Raadinta Nolol kale
Taariikhda Cilmi Falaga
Dadku waxay waligoodba jeclaayeen ineey fahmaan isla markaana ogaadaan in duunyooyin kale oo sida dhulka ah jiraan. Shan meere (qorraxda, dayaxa, dusaa, waxaraxir, farraare, cirjeex iyo raage) oo isha lagu arki karo ayaa aqoon yar loo lahaa tan iyo tobanaan qarni ka hor, kuwaas oo saamayn ku lahaa dadkii wakhigaas noolaa.
Wakhtiyadii hore dadka xidigyahanada ahaa waxay aqoon u lahaayeen sida iftiino gaar ahi cirka u dhex maraan, xidigaha qaar wakhtiyada ay soo baxaan, kuwaas ooy u isticmaali jireen ineey ku safraan oogada dhulka iyo badaha waawayn dhexdooda. Ilbaxnimooyinkii hore, sida Giriiga, Shiinaha, Baabiloon (Babylon) iyo kuwo kaleba waxay aaminsanaayeen in dhulku badhtan u yahay dhamaan koonka.
Reer binu Israa'iil waxay rumaysteen in dhulku wareegsan yahay iyo adduunku waxba kama laalaado. Kitaabka quduska wuxuu yiri, Ayuub qaybta lix iyo labaatan aayadda toddoba waxaa ku qoran inuu dhulka ka laalaado wax aan waxba ahayn. Markay dadka badidiis rumaysteen in dhulku fidsan yahay, Kitaabka Quduuska ah wuxuu sheegay inuu wareegsan yahay. — Ishacyaah 40:22..
Ilbaxnimadii ugu horeeysay ee yeelata aqoon iyo fahan meerayaasha waxay ahayd Baabiloon (babylon) oo ku dhex taalay Mesobotaamiya wakhtiyadii u dhaxaysay 2'000 sano ilaa 1'000 sano ciise hortiis. Qoraalo duug ah oo ku beegan 700 sano ciise hortii kuwaas oo ka hadhay ilbaxnimadii Baabiloon waxa ku xusan liiska dhowr meere uu ka mid yahay waxaraxir. Sidoo kale waxaa ku qornaa liiska socodka meereyaasha waxaraxir, dusaa, farraare, cirjeex iyo raage; iyo meelaha ay ka iftiimaan wakhtiga habeenkii iyo wakhtiyada la arki karo sanadka.
Giriiga & Romanka
Horaantii ilbaxnimada Giriiga aqoon la mid ah tan Baabiloonta uma aanay lahayn meerayaasha iyo xidigaha. Laakiin qaringii 6aad ilaa qarnigii 5aad ciise hortiis ayaa qabiilada Pythagoras sameeysteen qaacidooyin cusub oo ay ku qeexeen qoraxda, dayaxa, dhulka iyo dhowr meere oo kale oo ku wareegaya dab badhtanka ka ololaya.
Pythagoreansku waxay ahaayeen dadkii ugu horeeyay ee sheegay in xidigta la arko qorax-dhaca (hesperos) iyo tan la arko qorax-soo-baxu (phosphoros) ineey yihiin xidig isku mid ah.
Si kastaba ha ahaatee, horaantii qarnigii 1aad ciise hortii, ayaa Giriigu horumariyeen xisaabinta meelaha iyo wakhtiyada la filaayo in la arko xidigaha. Taas oo u sahashay ineey ku kala ogaadaan xiliyada, wakhtiyada roobka la filaayo, iyo ineey u adeegsadaan socdaalada safarka.
Qiyaastii sanadkii 499 ciise hortii ayaa xidigisyahan Aryabhata ee wadanka Hindiya sheegay in dhulku ku wareego xariijintiisa, taasi oo uu ku qeexay in wareega dhulku ka yimaado dhanka galbeed.
Sidoo kale wuxuu aaminsanaa ineey jiraan tiro kale oo meerayaal ah, dhamantoodna ay ku wareegaan shay ka wayn.
Si kastaba ha ahaatee, ardey baranayay Cilmi Fallaga sanadkii 1500 Nilakantha Somayaji ayaa sii horumariyey qaacidadii Aryabhata, asagoo ku daray in dhulku sameeyo wareeg dheer oo uu ku wareego udub dhexaad, iyo in meerayaasha kala ah Waxaraxir, Dusaa, Farraare, Cirjeex iyo Raage dhamaantood ku wareegaan qorraxda.
Horaantii qarnigii 11aad ayaa aqoonta iyo cilmiga dowladii Islaamiyiintu aad u horumarisey fahanka iyo adeegsiga Cilmi Fallaga. Waxaa jirey dugsiyo gaar u ah barashada cimiga xidigaha, kuwaas oo lagu baran jirey wakhtiyada iyo meelahay ay ka soo baxaan xidiguhu isla markaana safarleeydu u isticmaali jireen jiheeye ahaan.
Waxa la sheegaa in badhtamihii qarnigii 12aad xiddigisyahan ibn Bajjah uu sheegay inuu uu arkay labo meere oo waji madoow aadna ugu dhow qorraxda, kuwaas oo uu horaantii qarnigii 13aad uu ku fasirey saynisyahan Qotb al-Din Shirazi ineey ahaayeen meerayaasha Waxaraxir iyo Dusaa. Taasi waxay muujineysaa heerka aqoonta fiican eey Muslimiinta wakhtigaas u lahaayeen cilmiga xidigaha iyo sida ay u isticmaali jireen.
7da Meere ee Ptolemy
Horaantii kacaankii sayniska ee qaarada Yurub waxaa la fahmey in meerayaashu yihiin duunyooyin dhisan lehna jidh la mid ah kan dhulka. Aqoonyahanadii Cilmi Fallagu waxay isku keeneen cilmigii xidigaha ee dhamaan dunida ka jirey. Waxay ogaadeen in dayaxa iyo qoraxdu ka duwan yihiin meerayaasha kale, sidaas darteed waxay ku dareen liis ka duwan liiska meerayaasha.
Horaantii qarnigii 17aad waxay heleen in meereyaasha Cirjeex iyo Raage yihiin duni ka wayn dhulka. Tan iyo intii laga gaadhayay qarnigii 19aad fahanka iyo aqoonta xidigaha iyo meerayaashu way isa soo tarayeen.
Qarnigii 19aad dhexdiisa xiddigisyahanadu waxay ogaadeen in duunyooyinka yaryar, sida Ceres, Pallas iyo Vesta, aanay ahayn meere laakiin ay yihiin duni yar sidaas darteed wax lagu magacaabay Asteroids. Sanadkii 1846dii waxaa la helay meeraha Docay (neptune) kaasi oo lagu daray liiska meerayaasha.
Si kastaba ha ahaatee, horraantii qarnigii 20aad waxaa la helay dunida yar ee Buluuto (pluto) taasi oo wakhtigaas la aaminsanaa ineey ka xajmi weeyn tahay dhulka, waxaana si dhakhso ah loogu aqoonsaday meeraha 9aad.
Qarniga 21aad wuxuu ku bilaabmay ayadoo aqoon fiican loo leeyahay meerayaasha, dayaxyada, qoraxda, dunida yar, asteroidska, iyo dhamaan walxaha ku dhex jira Bahda Midaysay Qorraxdu. Sidoo kale, waxaa muran adag ka aloosmay in Buluuto ay ka mid ahaato meerayaasha iyo in loo aqoonsado duni yar. Ugu dambayn sanadkii 2006da waxaa la isla af-gartey in buluuto loo yaqaano duni yar, taasi oo tirada meerayaasha bahda midaysay qorraxda ka dhigeeysa siddeed meere (Waxaraxir, Dusaa, Dhulka, Farraare, Cirjeex, Raage, Uraano iyo Docey).
Dhinaca kale, maadaama teknoolajiyada ilbaxnimada dadku horumartey waxaa la sameeyay teleskoobyo waawayn oo lagu fiirinayo baho qoraxyeedyo kale, galaagsiyo kale iyo dhaamaan xidigaha ku baahsan koonka. Sidoo kale, wakhtigan waxaa la dul tagay dayaxa, dayaxgacmeedyo iyo satelaatyo ayaa hawada loo direy, dayaxgacmeed isagu ismaamulaya ayaa Farraare lagu dejiyay, xidigo badan iyo galaagsiyo badana waa la magacaabay.
Marka la tixraaco Midowga Caalamiga ee Cilmi Fallaga (International Astronomical Union) oo loo soo gaabiyo (IAU) waxa jira 8 meere iyo 5 duni yar oo la aqoonsan yahay ee Bahda Qorraxdu Midaysay. Ayagoo ka sii fogaanaya dhanka Qorraxda meerayaashu waa:
Cirjeex waa kan ugu muga wayn leh, in u dhiganta 318 muga dhulka, halka Waxaraxir yahan kan ugu cufka yar, tiro u dhiganta 0.055 muga dhulka.
Dhanka kale, meerayaasha Bahda Qorraxdu Midaysay waxaa loo qaybin karaa guutooyin ayadoo lagu saleeynayo walxaha ay ka kooban yihiin:
Meere Dhagaxley: waa meerayaasha la midka ah dhulka, kuwaas oo leh jidh ka samaysan dhagaxaan, waxayna kala yihiin: Waxaraxir, Dusaa, Dhulka iyo Farraare. Waxaraxir waa midka ugu muga iyo miisaanka yar isla markaana ugu jidhka yar dhamaan Bahda Qorraxdu Midaysay, halka dhulku yahay kan ugu wayn meerayaasha dhagaxleyda ah.
Neefaha Waawayn: kuwani waa meerayasha inta ugu badan ka samaysan isku dhisyo neefo ah, sida caadiga ahna way ka wayn yihiin meerayaasha dhagaxleyda ah, waana: Cirjeex, Raage, Uraano iyo Docay. Meeraha Cirjeex waa kan ugu wayn dhamaan meerayaasha bahda qoraxdu midaysay.
Qorraxdu (sun) waa xiddigta iftiimisa, kulaylka gaadhiisa isla markaana cufisjiidad ku heeysa dhamaan meerayaasha Bahda Qorraxdu Midaysay. Miisaanka iyo cufka qoraxdu wuxuu la mid yahay 332,900 kan meeraha dhulka. Sidoo kale, bu'da dhexe ee qoraxda waxaa ka yimaada heerkulka, falaadhaha radiationka, elektaromagnetik radiation, iyo 400 ilaa 700 nm oo falaadhaha ileyska muuqda ah.
Caddaymo la arkey waxay xaqiijiyeen in barta qorraxdu ku taalo suurto gelisay in dhulka ka jirto nololi.
wakhti dhan 14 bilyan sano oo muujinaya da'da Qoraxda. Hada Qoraxdu waxay jirtaa 4.6 bilyan sano, markeey gaadho 6 bilyan sano si tartiib ah ayay u casaani taas oo muujineeysa in awoodeedu soo yaraaneyso. Markey 10 bilyan sano gaadho weey cadaani dhamaanteed - markan qoraxdu weey dhimatey.
Jiritaanka meerayashu waxay ku xidhan tahay nolosha qoraxda. Haddii isbedel ku yimaado qoraxda nolosha dhulka iyo waxkasta weey doorsoomayaan. Sida la qiyaasayo, Hal bilyan sano ka dib, midabka qoraxdu waa isbedeli iftiinkuna waa sii kordhi sababto ah Hiliyaamta bu'da qoraxda ayaa sii kordheeysa taas oo keeni doonta in 10% kordho iftiinka, heerkulka iyo falaadhaha khatarta ah ee ka soo baxa qoraxda; halka 3.5 bilyan sano ka dib ay badan doonto 40%.
Aqoonyahanada Cimiladu waxay sheegeen isbedelkaas qoraxda ku yimid wakhtigaas sare u qaadi ilayska halista ah ee "radiation" taas oo lumin doonto biyaha badaha dhulka. Wakhti yar gudaheed, waxaa kor u kici heerkulka oogada sare ee dhulka, sidoo kale isku-wareega Kaarboon Ogsaydh CO2 oo muhiim u ah nolosha dhirta ayaa jaha wareeri iskuna bedeli Kaarbon afar (C4) oo sun ah.
Dhirtu haday ka dhamaato dunida waxaa dhici in la waayo hawada Ogsajiin midaas oo sababaysa dhimashada noolaha oo dhan.
Hal bilyan sano oo kale kadib, heerkulka maqaarka sare ee dhulka wuxuu gaadhi, ugu yaraan, 70 degree Salsiyas midan oo jaho-wareer ku keenaysa miisaanka iyo cufis-jiidadka dunida.
Midabka qoraxdu wuxu noqon casaan 5 bilyan sano ka dib, isla markaan gacanka qoraxdu wuxuu gaadhi meel ka badan 250 jeer meesha uu hada joogo. Wakhtigan lama hubo, sida dhulku noqon, laakiin waxa la og yahay in wareega dhulku isbedeli sababto ah aad ayuu uga fogaani qoraxda.
Mudo yar ka dib, bu'da qoraxdu waxay isku bedeli cadaan bilaa kul iyo ileys ah, halkaas ayaana ugu dambeeysa isku xidhnaanta Bahda Qoraxdu Midaysay.
Sida Cilmi Fallagu sheegay Koonkan eeynu ku nool nahay waxa jira in ka badan bilyan meere, kuwaas oo ku baahsan geesaha Koonka.
Bahda Midaysay Qoraxdu oo ah meereyaasha aan si fiican u naqaano waxay ka kooban yihiin 8 meere oo kala ah:
Afarta Meere ee ugu dhow Qoraxda: Dusaa, Waxaraxir, Dhulka iyo Farraare
Dusaa (Mercury) oo ah mida Qoraxda ugu dhow,
Waxaraxir (Venus) oo ku xigta,
Dhulka oo ah dunida aan ku nool nahay iyo
Farraare (Mars) oo ah meeraha kali ah ee u qaab-dhismeed dhow dunida aan ku nool nahay.
Waxa jira baaxad weeyn oo u dhexeeysa 4 meere een soo sheegnay iyo inta kale.
Xajmiga iyo miisaanka Meerayaasha ka tirsan Bahda Midaysay Qoraxdu.
Afarta meere ee ka dambeeya baaxada weeyn ee hawooyinka iyo neefaha iyo dhagaxaanta ah waa meerayaasha xajmiga waaweeyn ee ka samaysan hawada iyo boodhka ee kala ah:
Cirjeex (Jupiter) waa meeraha oogu xajmi weeyn Bahda Midaysay Qoraxdu,
Raage (Saturn) waa meeraha labaad ee oogu xajmi weeyn Bahda Midaysay Qoraxdu, wuxuuna leeyahay dariimo wareeg ah oo ku wareegsan, waana meeraha oogu dayaxa badan asagoo leh 32 dayax
Uraano (Uranus) iyo meeraha
Sidoo kale waxaa jira aduunyooyin yar-yar oo dhamaantood baraf, hawo iyo xoogaa caro ah ka samaysan; waxaana ka mid ah:
Bluto (Pluto) oo wakhtiyadii hore loo aqoonsanaan jirey in uu ka mid yahay Bahda Midaysay Qoraxdu.
Meerayaashu weey kala xajmi duwan yihiin oo kala cimilo duwan yihiin. Meerayaasha qaar, sida Dusaa (Mercury) aad ayuu u kulul yahay maadaama qoraxda aad ugu dhow yahay.
Halka meereyaasha qaar leeyihiin dayaxyaal aad u faro badan, sida meeraha Raage ama Saturn wuxuu leeyahay 32 dayax oo ku wareega meerahaasi.
Afarta Meere ee u dhow qoraxda, kuwaas oo loo yaqaano Meere Dhagaxley sababtoo ah waxay ka samaysan yihiin dhagaxaan iyo macdano bir ah. Intooda u badan waxay leeyihiin tiro yar oo dayaxaan ah ama maba laha.
Qaabdhismeedka jidhkoodu wuxuu ka samaysan yahay oogo sare oo ka kooban macdanta silikates, iyo biro ay ka mid yihiin aayron iyo nikel kuwaas oo sameeya ubucda dhexe ee meerahaasi.
Meeraha Dusaa (mercury) waa kan ugu dhow qoraxda (masaafo dhan 0.4 AU u jirta qoraxda), iyo kan ugu yar dhamaan meerayaasha Bahda Qoraxdu Midaysay asagoo leh 0.55 muga dhulka.
Meeraha Waxaraxir ma lahan wax dayax ah, aad ayuuna u qalalan yahay - taas macnaheedu waa biyo ma lahan. Intaas waxaa dheer, meerahan waa kan ugu kulul dhamaan meerayaasha Bahda Qoraxdu Midaysay ayadoo leh 400 °C (752 °F).
Meeraha Dhulka (earth) waa kan sadexaad ee qoraxda u dhow (masaafo dhan 1 AU u jira qoraxda), kan ugu wayn ee ugu culus meerayaasha dhagaxleyda ah. Sidoo kale, waa meeraha kali ah ee leh dhaqdhaqaaq jiyooloji iyo dunida kali ah eey ka jirto nolol inta la ogyahay. Intaas waxaa dheer, dhulku waa meeraha kali ah ee leh biyo dareere ah dhamaan meerayaasha dhexe.
Meeraha Raage (saturn) waa meeraha lixaad ee qoraxda ugu dhow (masaafo dherer dhan 9.5 AU u jira qoraxda) iyo 95 jeer muga dhulka. Meerahan waxaa lagu yaqaanaa dariimada goobo ee ku wareegsan taasi oo ka samaysan xoogaa baraf iyo saxaro dhagaxaan ah, wuxuuna leeyahay 60% cufka Cirjeex, taasi oo ka dhigaysa meeraha ugu cufka yar dhamaan aduunyooyinka Bahda Qoraxdu Midaysay.
Meeraha Uraano waa kan todobaad ee qoraxda ugu dhow (asagoo u jira masaafo dhan 19.2 AU) iyo 14 jeer muga iyo miisaanka dhulka, kaasi oo ah kan ugu fudud dhamaan meerayaasha Bahda Qoraxdu Midaysay. Uraano wuxuu leeyahay ubuc dhexe oo ka qaboow badan oogada sare.
Cufka Meere[lower-alpha 1]
Dayaxa Dabiiciga[lower-alpha 2]
Dhulka[lower-alpha 3] 1.00 1.00 1.00 1.00 7.25 0.017 1.00 1 Maya N2, O2, Ar
Makemake ~0.12 0.000 7 38.5–53.1 309.88 28.96 0.159 0.32 0 ? ?[lower-alpha 4]
Eris 0.19 0.002 5 37.8–97.6 ~557 44.19 0.442 ~0.3 1 ? ?[lower-alpha 4]
Muuqaalka meere waa mid ku xidhan awooda  isla markaana keenta awood elektaromangantig isku haysa muuqaalka meere oo ka dhigtay mid goobo ah. Marka xadi go'an oo cuf ah uu ku xidhmo awooda cufisjiidadka oo u soo jiidta badhtanka walaxdaasi taasi ayaa keenta in sheygaasi yeesho qaab wareegsan.
Dhamaan meerayaasha, xidigaha, dhagaxaanta waawayn, dunida yar iyo walxaha kale ee koonka dhex sabeeynaya waxay leeyihiin qaab dhismeed goobada u dhow, taasi ooy sabab u tahay isku soo jiidashada bu'da dhexe ee shegaas oo cufisjiidadku ku hayo badhtanka.
Meere kasta wuxuu ku bilaabmay marxalad dareere ah; samayska marka hore, sheeyada miisaanka culus, ee qarada adag leh waxay iskugu tagaan bu'da ama badhtanka ayadoo inta fudud soo marto korka sare isla markaana ku qaboowdo ka dibna adke noqoto. Sidaas darteed, meere kasta waa kala duwan yahay xubnaha ku jira ubucda ama qeybta dhexe.
Dhinaca kale, meerayaasha dhagaxleyda ahi way ka duwan yihiin meerayaasha neefaha waawayn. Kuwa dhagaxleyda ahi waxay leeyihiin qolof adag oo ku dahaadhan iyo ubuc ka samaysan curiyeyaal bir ah sida Aayron, Nikel iyo iskudhisyo Silikoon ah, halka neefaha waawayni ku daboolan tahay daruur hawo iyo adke jilicsan ah.
Sida la isku waafaqay, dhamaan meerayaashu waxay ku wareegaan xidig, taasi oo loo yaqaano wareega sanadle (orbiting). Tusaale ahaan, meerayaasha Bahda Qoraxdu Midaysay dhamaantood waxay ku wareegaan qoraxda, jiho la mid ah tan qoraxdu u ged-gedoonto (waa qaab la mid ah habka saacadu u wareegto "clockwise"). Ugu yaraan, hal meere, WASP-17b, oo aad inooga fog ayaa la arkey inuu u wareego jiho ka duwan tan xidigtiisu u gedoonto.
Wakhtiga ay meere ku qaadato inuu dhamaystiro hal wareeg oo uu ku soo duurayo qoraxda waxaa loo yaqaanaa sanad. Hadaba sanadada meerayaashu way kala duwan yihiin taasi oo ku xidhan kolba masaafada iyo fogaanta uu u jiro qoraxda. Meeraha ugu fog masaafada qoraxda ayaa ugu sanad dheer isla markaana ugu socod gaaban sababtoo ah aad ayuu uga dheer yahay cufisjiidadka qoraxdaasi.
Meere kasta wuxuu ku gedgedoomaa (rotate) xariijin udub-dhexaadkiisa ah taasi oon la arki karin. Gedoonkaasi meere oo ka soo bilaabma bari ilaa galbeed ayaa waxay keentaa maalinta iyo habeenka, sababtoo ah iftiinka qoraxda ayaa kolba dhinac ka mid ah meerahaais u muuqda.
Inta u badan meerayaasha bahda qoraxdu midaysay waxay u soo gedoomaan hab waafaqsan wareega saacada, marka laga reebo meeraha Uraano oo asaga lagu wado in uu u gedoomo jiho lid ku ah wareega saacada. Gedgedoonka meerayaashu way kala duwan tahay, meeraha Dusaa waxay ku qaadataa dhowr saacadood inuu dhamaystiro gedoon xidhan, taasi oo ah habeen iyo maalinta Dusaa; halka meerayaasha waawayn ee neefta ah ay ku qaadato maalmo badan iney sameeyaan hal gedoon oo dhamaystiran.
Cufka iyo Miisaanka
Tirada Dayax ee Meeraha
Aqoonta Aadamaha ee Koonka
Sawiraan ka kooban xubnaha Bahda Midaysay Qoraxdu iyo sharaxaada xajmiga Meereyaasha iyo dayaxyadooda.
Qoraxda in ka badan 10,000 oo jeer ayay ka weeyn tahay isla markaana 41 trillion ayay ka mug iyo cuf weeyn tahay dhamaantood.
File:Color Image of Ariel as seen from Voyager 2.jpg
Ilaa iyo hada inta la ogyahay meeraha kali ah ee nolol ka jirto waa meeraha dhulka. Nolosha meeraha dhulka oo guud ahaan loo yaqaano "biosphere", ayaa waxa la aaminsan yahay ineey bilaabantay (qiyaastii) 3.5 bilyan sanno ka hor.
Dhulku wuxuu hooy u yahay malaayiin nooc oo noole ah, kaas ooy ka mid yihiin Aadamuhu. Ilaha Macdanta iyo habka is-daba-wareega biyaha ayaa ah mid u gaar ah meerahan isla markaana suurto gal ka dhigey ineey taageerada noolaha degan dhulka.
Raadinta Nolol kale
Evidence From a Unique Planet
↑ . International Astronomical Union http://www.iau.org/public_press/news/detail/iau0603/. Soo qaatay 2009-12-30. Maqan ama ebar |title= (caawin)
↑ kale oo sida dhulka ah jiraan. Shan meere (qoraxda, dayaxa, dusaa, waxaraxir, farraare, cirjeex iyo raage) oo isha lagu arki karo ayaa aqoon yar loo lahaa tan iyo tobanaan qarni
↑ Pluto and the Solar System, IAU
↑ Kitaabka Quduuska ah Iyo Cilmigu May Israacsan Yihiin?
↑ ”Qorayaasha Kitaabka waxay lahaayeen aqoon cilmiyeed oo ka sii horumarsan aqoonta qarnigooda. Matalan, waayihii hore dad badan waxay aamminsanayeen inuu adduunku kor saarnaa xayawaan, sida maroodi, doofaar ama dibi. Haddaba Kitaabka waxaa ku qoran “dhulkana Ilaahay wuxuu ka laalaadshaa wax aan waxba ahayn.” (Ayuub 26:7) Sidoo kale, si saxan ayuu Kitaabku qaabka adduunka ugu tilmaamay inuu ‘wareegsan’ yahay. (Ishacyaah 40:22) Markay eegaan aqoontan caynkan ah oo waqtigeeda ka horumarsan, dad badan waxay aamminsan yihiin in waxa ugu macquulsan uu yahay inay qorayaasha Kitaabka macluumaadkooda ka heleen xagga Ilaah.”
↑ Adduunku Waxba Kama Laalaado
↑ Otto E. Neugebauer, 1945, The History of Ancient Astronomy Problems and Methods, Journal of Near Eastern Studies, volume 4, issue 1, 1–38
↑ Babylonian Observational Astronomy |author=A. Sachs Philosophical Transactions of the Royal Society volume 276, issue 1257, May 2, 1974, 43–50, Royal Society of London
↑ Colin Ronan, Astronomy in China, Korea and Japan, Walker, Astronomy Before the Telescope, 264–265]
↑ Interactive Extra-solar Planets Catalog, The Extrasolar Planets Encyclopaedia], Schneider Jean, 16 January 2013]
↑ J. J. O'Connor and E. F. Robertson, [https://www.webcitation.org/6Dxq5ms1u?url=http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Aryabhata_I.html Aryabhata the Elder, MacTutor History of Mathematics archive
↑ K. V. Sarma (1997) "Astronomy in India" in Helaine Selin (editor) Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures, Kluwer Academic Publishers, ISBN 0-7923-4066-3, p. 116
↑ Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, volume 52, 565–594, Whipple Fred, 1964, The History of the Solar System
↑ John Burnet, Greek philosophy: Thales to Plato, 1950, Macmillan and Co., 7–11
↑ Planet Quest: The Epic Discovery of Alien Solar Systems, K. Croswell, The Free Press, 1997, 57
↑ Lyttleton Raymond A., 1936, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, volume 97, 108, On the possible results of an encounter of Pluto with the Neptunian system
↑ Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, volume 52, 565–594 Whipple Fred, 1964, The History of the Solar System
↑ Oxford English Dictionary, planet, n 2007, Note: select the Etymology tab
↑ Planet Quest: The Epic Discovery of Alien Solar Systems, K. Croswell, The Free Press, 1997, 57, 978-0-684-83252-4
↑ Lyttleton Raymond A. 1936 Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, volume 97, 108, On the possible results of an encounter of Pluto with the Neptunian system
↑ Astronomer Mike Brown Gps.caltech.edu
↑ Miisaanka iyo cufka qoraxdu wuxuu la mid yahay 332,900
↑ Hal bilyan sano
↑ "dhirta iskuna bedeli Kaarbon afar (C4) oo sun ah."
↑ "kul iyo ileys ah"
↑ Model of planetary motion in the works of Kerala astronomers, Ramasubramanian, K. Bulletin of the Astronomical Society of India, 26, 11–31 [23–4], 1998
↑ Raymond A., 1936 Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 97, 108, On the possible results of an encounter of Pluto with the Neptunian system
↑ Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, volume 52, 565–594 , Whipple Fred, 1964, The History of the Solar System, issue 2
↑ dhagaxaan iyo macdano bir
↑ [http://www.nineplanets.org/mercury.html 2006, Bill Arnett, Mercury, The Nine Planets |url=|accessdate=2006-09-14}}
↑ Benz, W., Slattery, W. L., Cameron, A. G. W. (1988), Collisional stripping of Mercury's mantle, Icarus, v. 74, p. 516–528.]
↑ Mark Alan Bullock, The Stability of Climate on Venus, Southwest Research Institute
↑ Paul Rincon, Climate Change as a Regulator of Tectonics on Venus, Johnson Space Center Houston, TX, Institute of Meteoritics, University of New Mexico, Albuquerque, NM
↑ xayawaanka iyo dhir
↑ Modern Martian Marvels: Volcanoes? David Noever NASA Astrobiology Magazine
↑ Encyclopaedia of the Solar System|editor=Lucy-Ann McFadden et al., Mars Atmosphere: History and Surface Interactions, David C. Gatling, Conway Leovy, 301–314, 2007}}
↑ Kids Mars: A Kid's Eye View, NASA
↑ A Survey for Outer Satellites of Mars: Limits to Completeness, Scott S. Sheppard, David Jewitt, and Jan Kleyna, Astronomical Journa
↑ "Density of Saturn, Fraser Cain, universetoday.com". La keydiyay asal ahaan 2013-08-09. Soo qaatay 2013-08-09. Barameter aan la aqoon |ciwaan= ignored (caawin)
↑ Kargel J. S., Cryovolcanism on the icy satellites, Earth, Moon, and Planets, 67, 101–113, 1994
↑ 10 Mysteries of the Solar System, Astronomy Now, volume 19, pages 65, 2005
↑ Post Voyager comparisons of the interiors of Uranus and Neptune, Podolak, M.; Reynolds, R. T.; Young, R, 1990, pages 1737, issue 10, vol. 17, Geophysical Research Letters
↑ cufka iyo muga ee ku taxan awooda cufisjiidadka
↑ NASA Staff (20 December 2011). "Nuqul Archive". NASA. Waxaa laga kaydiyay the original 2013-01-26. Soo qaatay 2011-12-23. Barameter aan la aqoon |ciwaan= ignored (caawin)
↑ 59.0 59.1 Schneider, Jean (16 January 2013). http://exoplanet.eu/catalog.php. Soo qaatay 2013-01-15. Maqan ama ebar |title= (caawin)
↑ Lyttleton, Raymond A., 1936, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 97, 108, On the possible results of an encounter of Pluto with the Neptunian system
↑ Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, volume 52, pages 565–594, Whipple Fred, 1964, The History of the Solar System
↑ The Living Planet
↑ Ptolemy's Almagest, Ptolemy, G. J. Toomer, Princeton University Press, 1998
↑ John Burnet Greek philosophy: Thales to Plato, 1950 Macmillan and Co., 7–11
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Meere&oldid=235512"
Last edited on 12 May 2022, at 19:00
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 12 May 2022, marka ee eheed 19:00.